Sales - Executive Archives - Glory Assumption Space
Sales Executive – Male (5)Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ကမာရွတ်မြို့နယ်
Sales Executive – Male (5)Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ကမာရွတ်မြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Lubricant ပိုင်းဖြင့်လုပ်သက် ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - တခါတရံနယ်သွားနိုင်ရမည်။ - အင်ဂျင် 1500 CC မောင်းနိုင်ရမည်။ - Auto Manual မောင်းနိုင်ရမည်။ - ကားမောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။ မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Lubricant Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Executive – Male - (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
Sales Executive – Male - (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ။ • Sales Executive ရာထူးဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲရဖြစ်ရမည် ။ • Sales & Marketing နှင့်သက်ဆိုင်သော Diploma ရရှိထားသူဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ( ၃၀ ) နှစ်ဝန်းကျင်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • ကားမောင်းလိုင်စင်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • တနင်္ဂနွေ နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည် ။ • မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ Medical Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ Medical Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09263121101, 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 , 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Executive - Male/Female - (5) Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ဒဂုံမြို့နယ် ( မြို့ထဲ)
Sales Executive - Male/Female - (5) Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ဒဂုံမြို့နယ် ( မြို့ထဲ) ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ်ရှိရမည်။ • Computer အရောင်းပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ • Sales Staff များကိုကောင်းမွန်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ • အသက် ၃၅ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉ နာရီခွဲ မှ ညနေ ၆ နာရီအထိတာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ • တစ်ပတ် တစ်ရက်နားရမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဒဂုံမြို့နယ် ( မြို့ထဲ) တွင်ရှိသော Computer Sales & Service Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Executive – Male - (5) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / ပုစွန်တောင်မြို့နယ်
Sales Executive – Male - (5) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / ပုစွန်တောင်မြို့နယ် ။ • M.B.B.S ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • အရောင်းပိုင်းစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည် ။ • အရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည် ။ • အသက် ( ၂၅ ) နှစ်မှ ( ၃၅ ) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန်မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • တနင်္ဂနွေ နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည် ။ • မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်တွင်အင်တာဗျူးဝင်ရမည် ။ • ပုစွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ Laboratory တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ပုစွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ Laboratory ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Executive – Male - (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ကျောက်တံတားမြို့နယ်
Location in : Kyauk Tadar
Sales Executive – Male - (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ကျောက်တံတားမြို့နယ် ။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • Construction Materials ပိုင်းဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • ကားမောင်းလိုင်စင်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ( ၂၅ ) နှစ်မှ ( ၃၀ ) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန်မနက် ၈း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ ပိတ်သည် ။ • ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ Construction Materials Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ Construction Materials Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Executive – Male (5) Post / လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ် - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) +++
အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ 1.	Sales Executive – Male (5) Post / လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ် - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) +++ / ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	အသက် (၂၅ - ၃၅)နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။ •	Sales နှင့် သက်ဆိုင်သော Diploma များရရှိထားရမည်။ •	ငွေစာရင်းများ လုပ်နိုင်ပါက ဦးစားပေးမည်။ •	ကားမှုတ်ဆေးလုပ်ငန်းတွင် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၅ )နှစ် အထက်ရှိရမည်။ •	အလုပ်ချိန် မနက် (၉) နာရီမှ ညနေ (၅) နာရီအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ •	ယူနီဖောင်းရှိသည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ •	ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ကားမှုတ်ဆေးများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသော Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ FMCG Distribution Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Executive – Male/Female - ( 5) Posts / လစာ - ၅၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း )
Salary Rang : 550000
၁) Sales Executive – Male/Female - ( 5) Posts / လစာ - ၅၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း )/ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃) နှစ်ရှိရမည်။ • Medical ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည် ။ • ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည် ။ • Marketing နှင့်သက်ဆိုင်သော Diploma ရရှိထားသူဖြစ်ရမည် ။ • Computer ( Internet , Email ) ရရမည် ။ • အသက် (၂၅) နှစ်မှ (၃၅) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည် ။ • ယူနီဖောင်းရှိသည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည် ။ • မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်တွင် အင်တာဗျူးဝင်၍ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ Laboratory တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Executive – Female - (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် +Commission
၁)Sales Executive – Female - (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် +Commission / အလုံမြို့နယ် ။ • Cosmetic အ​ရောင်းပိုင်းဖြင့်​ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်​အထက်​ရှိရမည်​။ • Yangon Way Plan များရေးဆွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ( ၂၃ ) နှစ် မှ ( ၃၀ ) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည် ။ • Sale Target ပြည့်မှီအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • Customer Service ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည် ။ • ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည် ။ • အဖွဲ့အစည်းတွင် အချင်းချင်းဖေးမကူညီဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉း၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၆း၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ • စနေ တစ်ပတ်ခြား ၊ တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ . ဖယ်​ရီ စီစဉ်​​ပေးသည်​။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အလုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော Cosmetic Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁) Sales Executive - Male - (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)+Ph Bill + ကော်မရှင်/ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ။
၁) Sales Executive - Male - (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)+Ph Bill + ကော်မရှင်/ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ်ရှိရမည်။ • ဘွဲ့ရရှိထားသူဦးစားပေးမည်။ • English စကားရေး၊ဖတ်၊ပြော ကျွမ်းကျင်ရမည်။ • Computer အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • အသက် ( ၃၀ ) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ • အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် ( 9:00 AM ) to ( 5:30 PM ) • စနေ၊တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ • စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော Chemical Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောစမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် ရှိသော Chemical Distribution Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
1. Sales Executive – Female (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / လှိုင်မြို့နယ် ။
1. Sales Executive – Female (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / လှိုင်မြို့နယ် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • B2B အရောင်းပိုင်းဖြင့် လုပ်သက် (၂)နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။ • Event ပိုင်း အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ • အသက် ( ၂၃) နှစ်မှ ( ၃၀) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ • အပြင်ထွက်သွားလာနိုင်ရမည်။ • Under Pressure အောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် ( 8:30 AM – 5:30 PM ) • တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ • နေ့လည်စာ ပေးသည်။ • လှိုင်မြို့နယ်ရှိ Distribution Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်မြို့နယ်ရှိ Distribution Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
၁) Sales Executive – Male (5)Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ကမာရွတ်မြို့နယ်။
၁) Sales Executive – Male (5)Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ကမာရွတ်မြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Lubricant ပိုင်းဖြင့်လုပ်သက် ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - တခါတရံနယ်သွားနိုင်ရမည်။ - အင်ဂျင် 1500 CC မောင်းနိုင်ရမည်။ - Auto Manual မောင်းနိုင်ရမည်။ - ကားမောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။ မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Lubricant Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက္ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁) Sales Executive – Male (5)Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကပျြ /ကမာရှတျမွို့နယျ။
၁) Sales Executive – Male (5)Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကပျြ /ကမာရှတျမွို့နယျ။ - ဘှဲ့ရဖွဈရမညျ။ - Lubricant ပိုငျးဖွငျ့လုပျသကျ ရှိသူဖွဈရမညျ။ - တခါတရံနယျသှားနိုငျရမညျ။ - အငျဂငျြ 1500 CC မောငျးနိုငျရမညျ။ - Auto Manual မောငျးနိုငျရမညျ။ - ကားမောငျးလိုငျစငျရှိရမညျ။ မင်ျဂလာပါရှငျ့။GAS နှငျ့ခြိတျဆကျထားသော Lubricant Company တှငျတာဝနျထမျးဆောငျရနျ အထက်ပါဝနျထမျး အမွနျအလို ရှိသညျ။ Viber ဖွငျ့ CV ပို့မညျဆိုပါက ဓာတျပုံသခြော ကွညျလငျပွတျသားစှာ ရိုကျ၍ ပေးပို့ပေးပါရနျ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခနျးလိပျစာ –ရုံးခနျးလိပျစာ – ခွံအမှတျ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကေြာငျးလမျး ၊ ၉ မိုငျ၊ မရမျးကုနျးမွို့နယျ ။ ( ၉ မိုငျ မှတျတိုငျတှငျဆငျးရနျ ။ Ocean North Point နှငျ့နီးပါသညျ ။ )
၁) Sales Executive ( Engine Oil Distribution ) – Male – ( 18 ) Posts - လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ++++ ( ညှိနှိုင်း ) – ရန်ကင်းမြို့နယ် ။ ( ကုမ္ပဏီမှ တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူး ) ( လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် ။ ) ( အင်တာဗျူး ချက်ချင်းဝင်ရမည် ။ ) • စက်ဆီ ချောဆီ အရောင်း လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၃ ) နှစ် အထက် ရှိရမည် ။ • စက်ဆီ ၊ ချောဆီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးအပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ( လုံးဝ ) အတွေ့အကြုံ ရှိသူ ဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ( ၂၅ ) နှစ် မှ ( ၃၀ ) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ( ၉ ) နာရီ မှ ည ( ၅ ) နာရီအထိ ။ • တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက် ပိတ်ပါသည် ။ • ချက်ချင်းတိုက်ရိုက် အင်တာဗျူး ၀င်နိုင်ရမည် ။ • ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ စက်ဆီ ၊ ချောဆီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ မှတျခကျြ ။ ။ CV Form မြားတှငျ Passport ဓာတျပုံ တဈပါတညျးထညျ့သှငျးပေးပါရနျ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ။ Email ဖွငျ့လညျးကောငျး၊ လူကိုယျတိုငျလညျးကောငျး လာရောကျလြှောကျထားနိုငျပါသညျ။ Viber ဖွငျ့ CV ပို့မညျဆိုပါက ဓာတျပုံသခြော ကွညျလငျပွတျသားစှာရိုကျ၍ ပေးပို့ပေးပါရနျ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ ။ E-mail - gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09977397705 ရုံးခနျးလိပျစာ – ခွံအမှတျ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုငျ ၊ မရမျးကုနျး မွို့နယျ ။ ( ပွညျလမျး ၊ ၉ မိုငျ မှတျတိုငျတှငျ ဆငျးရနျ ။ Ocean North Point နှငျ့ နီးပါသညျ။ )
Sales Executive – Male/Female (10) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ Aluminum Decoration Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ အင်တာဗျူး အမြန်ဝင်ရမည်။ 1.	Sales Executive – Male/Female (10) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) +++ / လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ် ရှိရမည်။ •	Construction ပစ္စည်းများရောင်းခဲ့ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ •	Construction Site များသို့သွားရောက်နိုင်ရမည်။ •	Computer Internet & Email အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	တစ်ခါတစ်ရံလိုအပ်လျှင် နယ်သွားရမည်။ •	အလုပ်ချိန် ( 8:30 AM – 5:30 PM ) •	သမိုင်းလမ်းဆုံထိ ဖယ်ရီရှိသည်။ ယူနီဖောင်းရှိသည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.5@gmail.com, gasrecruit.1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09263121101 09977397705 , 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Executive - Female - (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကျောက်မျက်ရတနာ ကုမ္ပဏီတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ ချက်ချင်း အင်တာဗျူးဝင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၁ ) Sales Executive - Female - (5) Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။ ( ကျောင်းကိစ္စ ကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရပါမည်။ ) - အသက် ၂၃ - ၃၀ အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းအားစိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ - Jewelleryပိုင်းတွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ(သို့) အရောင်းပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူများကို ဦးစားပေး ခန့်ထားပါမည်။ - Jewelleryလုပ်ငန်းတွင်အောင်မြင်စွာတာဝန်ထမ်းဆောင်လို သူ၊ တာဝန်လိုစိတ်အပြည့်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - တရုတ်ဘာသာစကား ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်သူ ကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါ တည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။